Exclusive:काठमाडौँमा भयो अच'म्मको बिहे,केटाले केटालाईनै लगाईदिए सिन्दुर,बच्चा के होला? - Onlines Time
Exclusive:काठमाडौँमा भयो अच’म्मको बिहे,केटाले केटालाईनै लगाईदिए सिन्दुर,बच्चा के होला?
December 4, 2020 December 4, 2020 by onlinestime
मानिसको व्यक्तित्वलाई खुट्टाको औंलाले झ’ल्काउँछ । खुट्टाको औंलाको आकारलाई हेरी तपाईंको व्य’वहारबारे बुझ्न सकिन्छ । तपाईंको चरित्रलाई खुट्टाको औंलाले संकेत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गरिन्छ ।ठूलो औंला: खुट्टाको ठूलो औंला वा पहिलो औंला अरु औंलाभन्दा धेरै लामो छ भने, त्यस्ता व्यक्ति स्मा’र्ट र क्रि’यटिभ स्व’भावका हुन्छन् । स’मस्याको छिट्टै स’माधान गर्न सक्छन् ।त्यसैगरी तपाईंको ठूलो औंला अरु औंलाभन्दा सानो छ भने, एकै समयमा धेरै काम गर्न सक्ने क्ष’मताको संकेत गर्छ ।
दोस्रो औंला: खुट्टाको दोस्रो औंला लामो हुने मानिसहरु ली’डर बन्न सक्ने गुण भएका हुन्छन् । यीनीहरुमा ग’तिशिल र सृ’जनात्मक गु’ण हुन्छ ।तेस्रो औंला: खुट्टाको तेस्रो औंला लामो भएका व्यक्तिहरु आफ्नो काममा उ’र्जावान र सि’पालु हुन्छन् । यीनीहरु जीवनमा पू’र्णता चाहन्छन् । र यीनीहरुले जीवनमा धेरै चीज प्राप्त गर्छन् । आफ्नो कामको लागि परिवार , प्रेम र मनोरञ्जनलाई पनि बिर्सन सक्ने यीनीहरुको नराम्रो स्वभाव हुन्छ ।त्यसैगरी तेस्रो औंला सानो भएका व्यक्तिहरुले भने जीवन धेरै रमाईलो पूर्वक बि’ताउँछन् ।यीनीहरु जीवनमा काम गर्न भन्दा आराम लिनमा रुची राख्छन् ।
चौथो औंला: चौथो औंला लामो भएका व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई निकै नै म’हत्वपूर्ण मान्छन् । यदि तपाईंको चौथो औंला घु’माउरो किसीमको छ भने , प्रेमसम्बन्ध निकै नै न’राम्रो हुन्छ ।चौथो औंला सानो भएका व्यक्तिहरुका लागि परिवार र सम्बन्ध त्यति महत्वपूर्ण हुदैन ।सानो औंला: अन्तिम औंला सानो भएका व्यक्तिहरुको स्व’भाव बच्चाको जस्तो हुन्छ । यीनीहरु जि’म्मेवारी ब’हन गर्न मनपराउँदैनन् । र चा’डैं नि’राश हुने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु रमाईलो गर्न मनपराउँछन् ।सानो औंलालाई ह’ल्लाउन सक्ने व्यक्तिहरु साहसी र आ’र्कषक हुन्छन् भने ह’ल्लाउन नसक्ने व्यक्ति इ’मान्दार हुन्छन् ।
Prevअनिताको फेरि जटिलअप्रेसन गर्नुपर्ने भयो, अप्रेसन पछि अनितलाइ के हुनेछ? Binod Khadka & Anita Khadka
Nextमलेशिया सरकारले गर्यो विदेशी श्रमिकको लेभी सम्बन्धमा यस्तो घो’षणा